အားလုံးအတွက် အမှတ်တရ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » အားလုံးအတွက် အမှတ်တရ	22
Posted by ဖိုးထောင် on Jul 20, 2012 in Photography, Travel | 22 comments
လက်ကမြင်းခြင်း (ဦးပေါက် ညီ ဦးထောက်)
မြို့မန္တလေး နဲ့ဝန်းကျင်ပုံလေးတွေ အမှတ်တရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကျုံးရေပြင် မြို့ရိုးနဲ့ ရှမ်းရိုးမ အလှ
တိမ်တွေက အုံ့ဆိုင်း မှုန်မှိုင်းလို့နေသည် မန္တလာမဟီ
တင်တတ်မယ်ဆိုရင် အမှန်တကယ် ကျေးဇူးရှင်
လယ်ကွင်းတွေက တမျှော်တခေါ် စိုပြေလွင် ရိပ်သိမ်းချိန်ဆိုပြန်ရင်
ဦးခိုင်ဆီကရတဲ့ ဆွဲပြားရောင်းရငွေ ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါး ၁၀၀၀ နဲ့ ချပြီကွာကဲ……..
has written 21 post in this blog.
View all posts by ဖိုးထောင် →	Blog
မောင်ပေ says: အလို
ဆီးနဲ့ ကျောက်ကပ် အဖို့ ရာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4578
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဂလု …
နာလည်း ဆွဲချင်လိုက်ဒါနော် ..
တံတွေးကို မနည်း မြိုချရတယ် …
ဦးခိုင်ဆီက ရတဲ့ တစ်ထောင်နဲ့ဆိုတော့
နာ့လည်း နည်းနည်းတော့ မျှပါအုံးလားကွယ် ..
သန်းထွဋ်ဦး says: ကိုပေတို့ များ ဆေးဖက်တောင်ထည့်တွက်ထားသေး၏။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3359
အရီးခင်လတ် says: ဘယ်ပုံ အကြိုက်ဆုံးလဲ လို့ ကြည့်လာတာ အောက်ဆုံး ပုံ အကြိုက်ဆုံး။
အိုးထဲ က ထန်းရည်လား?
အဲဒါပြီး ရင် ဒုတိယပုံ ကြိုက်ပါတယ်။ :-)
ကြည့်ရတာ စိတ်ထဲ မှာ တစ်ခုခုကို ဂုဏ်ယူသလို၊ ဝမ်းနည်းသလို။ နဲ့။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5316
MaMa says: မိုက်လဒယ်… ဦးပေါက် ညီ ဦးထောက် ရဲ့ ပုံလေးတွေက။
တော်ပါပေတယ် ရွာသားပီသတယ်။ ဦးခိုင်ဆီက ၁၀၀၀ ရတာနဲ့ ရွာထဲမှာ ချကျွေးတော့တာပဲ။
ရွာသားတွေကို မျက်နှာလိုက်လို့။ :angry:
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 388
မိုးတိမ် says: ဓါတ်ပုံတွေဆို ကိုယ်က ဘာမှမသိလို့ ဘာမှဝင်ရောက်မပြောပါ၊(သိမှမသိတာကိုး)
သို့သော် ကိုဖိုးထောင်ရဲ့  sky beer ကိုတော့ အတော်လွမ်းကြောင်းပါ။
ဦးပိန်တံတား ဟိုဘက်က ထရေကတော့ စွန်ပါဘူးဗျာ။ဘာမှအရောနှောမရှိရင်သိပ်ကောင်းမှာဗျ။
ကျောင်းသားတွေကများတော့လဲ ရှိစေတော့၊ရှိစေတော့။ခုတော့လဲ ဘာမှသောက်ရတော့ဘူး။
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ငါးရောင်းတဲ့ကလေးတွေ၊ လာလာတောင်းတတ်တဲ့ အဘိုးကြီးလဲ သတိရသဗျ။
အထူးသဖြင့် နန်းရှေ့ ဘက်က (တရားရုံးလမ်းဒေါင့်က ဘီယာဆိုင်ကို သတိရသဗျ)
သန်းထွဋ်ဦး says: ဆေးလိပ်ဗူးလေး မြင်တော့ ဘာလိုလိုနဲ့ ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တာ တစ်နှစ်ပြည့်သလို၊
ထန်းရည်စစ်စစ်မသောက်ရသည်မှာ မကွေးသို့ မရောက်ဖြစ်သော လများးးးးးး
ဖိုးထောင် says: အန်ကယ်ကြီး ဦးပေနဲ့ ဦးတောက်တဲ့တို့အား လှိုက်လှဲစွာဖိတ်ခေါ်ပါ၏ (အဲဒါ ဦးတောက်တဲ့ ပိုက်ပိုက်မို့ပါ)
အရီးလတ် အဲဒါထန်းရည်မစစ်ရင် ဖါးပြုတ်ဖြစ်ရပါစေရဲ့တဲ့(ဆိုင်ရှင်ပြောတာ ဖါးပြုတ်ရည်သေချာသလောက်)
တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်တော့ မြန်မာ့ဂုဏ်ရောင် ထွန်းရှိန်ပြောင်ဦးမှာပါ အရီးရယ် အရီးဝမ်းနည်းရင် သားသားငိုမိမှာပေါ့နော်
အန်ကယ်ဦးမိုးတိမ်က တရားရုံးထောင့်က ဘီယာဆိုင်ကိုသတိရတာလား ဘီယာနဲ့တွဲပြီး ရောင်းတဲ့ ……… ဟာလေးတွေကို သတိရတာလားဟင်
ဦးသန်းထွတ်ဦး ထန်းရည်စစ်စစ် သောက်ချင်ရင် လာခဲ့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ဇောက် ထိုး says: မူးရစ်သေစာ သောက်စားခြင်းမှာ ရှောင်ကြည်ပါ၏ဘုရား…ဟဲ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2243
water-melon says: အူးလေးအူးလေး မဲမဲအိုးထဲက အရည်တွေက ဆန်ဆေးရေတွေလားဗျ
ဒါနဲ့မနေ့က font ကြီးအောင်လုပ်ပေးရတဲ့ လက်ခလေး
အဟဲ့ အဟဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 923
mamanoyar says: မန်းလေးရှုခင်းအရမ်းလှတာပဲ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 476
AKKO says: တကယ့်ရွာကိုသွားလည်နေရသလိုခံစားရပါတယ် ။
ထန်းရည်နဲ့ ကြက်ကြော် သံပုရာသီးလေးကလည်း မွှေးနေတာပဲ ။ အသုတ်လေးကလည်း ခရမ်းချဉ်သီး နန်းကျင်းနဲ့ မြင်ရတဲ့လူ သွားရေကျသွားပြီ ။
တောဆိုလို့ ပြန်စရာမရှိတာကြောင့် ထန်းရည် အရသာ တစ်ခါမှ မြည်းစမ်းခွင့်မရခဲ့ပါဘူ ။ ဓါတ်ပုံလေးမြင်တော့မှပဲ ဒီလိုစားရ သောက်ရပါလားသိတယ် ။
တစ်ခါတစ်လေ မြို့ပြနေ မွန်းကြပ်တဲ့ ဘ၀ထဲက ရုန်းထွက်ပြီး တစ်ခါလောက် အဲ့လိုလေးနေပစ်လိုက်ချင်တယ် ။ စကားမစပ် အစကတော့ ဖရဲတို့ စိန်ဗိုက်ဗိုက်နဲ့ ရွယ်တူထင်ထားတာ :P တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ ။
ဖိုးထောင် says: ဟုတ်ကဲ့ အန်ကယ်ဖရဲ ဆန်ဆေးရေရောထားတဲ့ ထန်းရည်လေးတွေပါ spy လောက်တော့မကောင်းပါဘူး font ပြောင်းခက Tango ပေးပြီးပြီလေ အန်ကယ်ဖရဲအတွက်က အနော် ပဲပုတ်ချက်လေးနဲ့ အန်ကယ် ကိုအောင်ပု ပုံလေးတွေစီစဉ်ပေးထားတယ်း)
အန်ကယ်ကြီး AKKO ရေ မန္တလေးကိုလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် (တစ်ယောက်တည်းလာနော် အဟိ)
ဟုတ်တယ် တားတားက ဖရဲထက် ၃ နှစ်ငယ်တယ် စိန်ဗိုက်ဗိုက်က သားထက် ၂ နှစ်ကြီးတယ် အဟင့်
ဖိုးထောင် says: မမနိုရာလိုပဲ ရွာကိုလွမ်းလို့ အလွမ်းပြေတင်ကြည့်တာပါ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 13
Zu says: တောက်.
ပဲခြမ်းသုတ် ပန်းကန်မြင်ပြီး သွားရည်တောင် ကျတယ်ကွာ..ရှလွတ်.
ဖိုးထောင် says: မမရေ အနော်က မျက်နှာမလိုက်တတ်ပါဘူးခင်ဗျ လိုက်မယ့်လိုက် လူကိုယ်တိုင်ကို လိုက်ပလိုက်တာ….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 531
myanmarcitizen says: အေ့ .. အေ့ .. ကိုဖိုးထောက် ကသူများလေထအောင်လာလုပ်နေတယ်။ ထန်းရေကလဲကောင်း အမြည်းကလဲ ကောင်း မယ့်ပုံပဲ။ ဇရက်မင်းစီးစိမ်ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာ။ သောက်လိုက် ဖွာလိုက် တော်ကီပွားလိုက်နဲ့ ဟင်း … ပြောရင်းနဲ့
ဘဲဥ says: ကဖိုးထောင် သများကို သမာဓိပျက်အောင်လုပ်နေဒါလား
များဒို့ဂ စိတ်ခိုင်တာဟုတ်ဘူးရယ် အဲ့ဒါမျိုးမြင်ရင် မသောက်ဘဲကို မနေနိုင်တာ ဂလု(တံတွေးမြိုချသံ)
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 118
ပင်လယ် ပျော် says: ညီလေးဖိုးထောင် …….. မန်းလေးမှာညီလေးတို့ ပြုစုခဲ့တဲ့အတွက် အစ်ကိုကြီးတို့ မောင်နှံအရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား ……. နောက်လည်း အခုလို အစ်ကိုကြီးတို့ကို ပြုစုနိုင်ပါစေလို့ ……ညီလေးထောင်ပုံတွေကို အားပေးရင်းသွားရည်ကျပြန် တမ်းတမိပါ ကြောင်း..
ဟိုညီလေး ကိုပေ ကိုပေါက်နှင့် မဒန်ချယ်ရီ ကိုဥ ကိုဖရဲ ကိုရွှေမင်းသား အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
ပင်လယ်ပျော် ဇနီးမောင်နှမနှင့် တူမလေး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3194
manawphyulay says: အပေါ်က ပုံလေးတွေတော့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ သေရည်သေရက် မသောက်စားသင့်ဘူး။ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်ထားတဲ့ပုံတွေပါလိမ့်….
ဖိုးထောင် says: တကယ့်ကို ဇရက်မင်းစည်းစိမ်အပြည့်ပါဗျား အစားကောင်းလေးစားရတော့ မိတ်ဆွေတွေကိုသတိရလို့ပါ Myanmarcitizen ခင်ဗျ
ဘဲဥမရေ ဘီယာထက်ကောင်းတာတော့ အမှန်ဗျို့
ဦးဦးပင်လယ်ပျော်ရေ အနော်တို့ မန်းသားတွေက သီချင်းထဲကလိုပါပဲ ဧည့်သည်လာရင်ကိုပျော်နေတာပါ ဧည့်သည်ပြန်ရင်လည်းလွမ်းတတ်ပါတယ် အဟင့် ပြောရင်းနဲ့ ငိုချင်လာပြီ ရွှတ်ရွှတ်ရွှတ်
ဖိုးထောင် says: အနောဖြူရေးကရဲ မများပါဘူး နည်းနည်းပါ
Comments By Postအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - TNA - Mr. MarGaရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - padonmar - Traditional Medicineမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - naywoon ni - black chawတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - TNA - Traditional Medicineရထား ထွက်တော့ မယ် - TNA - Mr. MarGaCongress - ကထူးဆန်း - Traditional Medicineဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - Aung Myat Lin - kyeemiteသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အလင်း ဆက် - Traditional Medicineဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - အလင်း ဆက် - Traditional Medicineသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - Mobile13လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - Traditional Medicine - မောင် ပေအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - Traditional Medicine - ဖော့(စ)ထရော့ချာလီဦးဖိုးလူနှင့် ပထမဆုံးများ - Mobile13 - မောင် ပေအဟံ ပထမံ - မောင် ပေ - Mr. MarGaပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - Hnin Ei - Ma Eiနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Ei Kyipyar - ko pauk mandalayအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - TheWinner Getprize - TheWinner Getprizeကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - လူကလေး - သူကလေးငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - လူကလေး - သူကလေးလူပါး ပုလင်းထိ - Ma Ma - Ma Maကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - ဦးဦးပါလေရာမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ko pauk mandalay - panpanအတ္တဆန် - Ei Kyipyar - ကြောင်ဝတုတ်Passport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - ကြောင်ဝတုတ် - awra-choTeach Your Toddlers with These Best Free Learning Android Apps - awra-choEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77856 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67257 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66736 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58645 Kyats )MaMa (57815 Kyats )Top Posts & Pagesဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews